मास्कहरू → कार्य पोशाकहरू • पेशेवर P&M कम्प्युटर कढ़ाई
सुरक्षात्मक मास्क तिनीहरूले धेरै श्वासप्रणालीको संक्रामक रोगहरूको प्रसार रोक्न मद्दत गर्न सक्छन्। उनीहरु हाम्रो श्वसन प्रणाली को लागी एक राम्रो ढाल। यस्तो मास्क, नाक र मुख ढाक्ने, हानिकारक यौगिकहरूको पहुँच रोक्छ, तर दूषित हातहरू अनुहार छुनेबाट पनि रोक्दछ। तैपनि, एक मास्क लगाउनु संक्रमणको बिरूद्ध संरक्षणको ग्यारेन्टी छैन।
एक सुरक्षा मास्क को प्रयोग संक्रमण को रोकथाम गर्न अन्य उपायहरु संग मिसाउनु पर्छ।
सब भन्दा महत्त्वपूर्ण नियम मध्ये एक अनुपालन हो हात स्वच्छता र श्वासप्रणालीसाथै घनिष्ठ सम्पर्क बेवास्ता गर्न, अरूबाट कम्तिमा एक मिटरको दूरी राख्न उत्तम हुन्छ। यी केहि साधारण नियमहरू लागू गरेर हामी भाइरससँगको सम्पर्कबाट टाढा रहन मद्दत गर्दछौं।
सुरक्षात्मक मास्कहरू यसमा विभाजित छन्:
धेरै तिनीहरू मा सिलिएको जुन सामग्री मा निर्भर गर्दछ। वर्कवेयरको तत्वको रूपमा एक मास्क एक कर्मचारीको आवश्यक दैनिक कपडाको हिस्सा हुन सक्छ। सबैभन्दा फार्मेसीमा भेटिएकाहरू बनेको हुन्छन् nonwovens, एक सीधा काटिएको छ र लगाउन सजिलो छ, तर पहिलो प्रयोग पछि खारेज हुनु पर्छ।
हाम्रो अनलाइन स्टोरमा सुरक्षात्मक मास्क कपास नाजुक कालो बुनाई उपलब्ध छ >>
कपास मास्क तिनीहरू यति धेरै व्यावहारिक छन् कि तिनीहरूलाई उच्च तापमानमा प्रक्रिया गर्न पर्याप्त छ तिनीहरूलाई पुन: प्रयोग गर्न सक्षम हुन। यस उद्देश्यका लागि 60० डिग्रीसम्म धुनु पर्याप्त छ, तपाईं तिनीहरूलाई उच्च शक्तिमा इस्त्री गरेर वा उबलते पानीमा उमालेर कीटाणुशोधन गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, कम्तिमा %०% रक्सीको साथ तयारीको साथ मास्कको कीटाणुशोधन प्रभावकारी हुनेछ। तरलको साथ केवल मास्क स्प्रे गर्नुहोस् र यो सुक्को लागि कुर्नुहोस्।
मास्क संरक्षणको अप्रभावीताको बारेमा व्यापक धारणाको बावजुद, यो तथ्यलाई ध्यान दिएर हेर्नु लायक छ कि एक अपूर्ण मास्कले पनि एक सुरक्षात्मक कोट सिर्जना गर्न सक्छ, सिफारिश गरिएको दूरीको पारस्परिक सम्पर्कमा २ मीटरको प्रभावको तुलनासँग।
कसरी धेरै घण्टाको लागि आवश्यक पर्ने अनुहार मास्क लगाउने?
दुर्भाग्यवस, हामी मध्ये धेरैका लागि मास्क लगाउनु अलि थोरै देखिन्छ, विशेष गरी दिनमा धेरै घण्टा सम्म। कम अक्सिजनको कारण तपाईं सास फेर्न वा निद्रा महसुस गर्न सक्नुहुन्छ।
मास्क लगाएर निरन्तर असुविधा हटाउनका लागि तपाईले साधारण नियमहरू सम्झनु पर्छ। सबै भन्दा पहिले, यदि यो आवश्यक छ भने मात्र मास्क लगाउनुहोस्। यदि हामीसँग बाहिरबाट व्यक्तिसँग सम्पर्क छैन र हामी सार्वजनिक स्थानहरूमा छैनौं भने, यो डाउनलोड गर्न लायक छ, केहि मिनेटको लागि पनि। एक छोटो ब्रेक तपाईं आराम र ऑक्सीजनेट गर्न अनुमति दिनेछ।
यो केहि पुन: प्रयोज्य मास्कहरू पाउन लायक छ। तथ्या .्कगत रूपमा, एक व्यक्ति 8-१० मास्कहरू खरिद गर्दछ (र उनीहरूले लगाउने बित्तिकै उनीहरू खरिद गर्दछ), ताकि तिनीहरू दिनको समयमा परिवर्तन गर्न सक्दछन् र नुहाउन सक्दछन् - हामी अन्तर्वस्तुसँग गरेको व्यवहारसँग तुलना गर्न सकिन्छ। यदि हामी बन्द ठाउँमा हुनुपर्दछ भने, यो झ्याल खोल्न र गहिरो सास फेर्न पनि लायक छ। तपाईले बारम्बार कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी एउटा भिन्नता देख्नेछौं।
हाम्रो अनलाइन स्टोरमा मुख र नाकको लागि स्ट्रिटवेयर नीलो सुरक्षात्मक मास्क उपलब्ध छ >>
मास्कले दैनिक जीवनमा कसरी मद्दत गर्दछ?
मास्क हाम्रो श्वासप्रणालीको सुरक्षाको लागि डिजाइन गरिएको हो। महामारीको कारण लोकप्रियतामा यसको वृद्धि भए पनि, यसले ध्यान दिन लायकको छ जहाँ यसको अन्य परिस्थितिले हाम्रो स्वास्थ्यलाई सुरक्षित राख्न मद्दत गर्दछ।
धेरै महिनादेखि हामी नियमित रूपमा हालको मिडियाबाट जानकारी प्राप्त गर्दै आएका छौं धुवाँ रिपोर्टजुनबाट तपाइँ तापी मौसममा प्रदूषणमा विशेष वृद्धि देख्न सक्नुहुन्छ। यसको बढ्दो सांद्रता यातायातको एक कडा गहनता र औद्योगिक बोटहरूसँगै ठूलो समूहमा सबैभन्दा खतरनाक छ।
यस कुरालाई ध्यानमा राख्दै, विश्वका ठूला शहरहरूमा बस्ने मानिसहरूले लामो समयदेखि अनुहारको मास्क प्रयोग गर्दै आएका छन्। बदलामा, वसन्त summerतु र गर्मी अवधिमा, हामी विभिन्न प्रकारका स्प्रेि exposedको संपर्कमा हुन्छौं, जहाँ रासायनिक कीटनाशक वा लामखुट्टे, टिक, र अन्य कीराहरूबाट संरक्षण प्रयोग गरिन्छ। साथै घर सफाई गर्दा, विशेष गरी कडा डिटर्जन्टको प्रयोग गरेर सामान्य सफाई गर्दा हामीले हाम्रो श्वासप्रणालीको रक्षा गर्न मास्कको प्रयोग गर्नुपर्दछ, ताकि हानिकारक बाफलाई सास नपर्नोस्।
एशियाई अनुहार मास्कBielenda फेशियलBielenda अनुहार मास्कचिनियाँ अनुहारको मास्कराम्रो अनुहार मास्कRossmann बाट राम्रो अनुहार मास्कघर मास्कघरेलु अनुहार मास्कएक्नेको लागि घरेलु मास्कघरेलु अनुहार मास्कघर बनाएको कायाकल्प अनुहार मास्कघरेलु ब्ल्याकहेड मास्कघरेलु कपाल मास्कझुर्रीहरूको लागि घर अनुहार मास्कअनुहार मास्कहरूको लागि घरेलु उपचारहेब फेशियलहेब अनुहार मास्ककसरी ग्लू र मास्क बिना स्लिम बनाउनतपाईको अनुहारको मास्क कुन सिफारिस गर्दछजापानी अनुहार मास्ककोरियाली मास्ककोरियाली अनुहार मास्ककोरियाली अनुहार मास्क पसलlomi lomi फेशियलमास्कanti-smog मास्कशल्य मुखवटापुरुषहरूको लागि मास्कअनुहार मास्कअनुहार मास्क आरोप लगाउनुहोस्एभन अनुहार मास्कअगाफिया बाबुश्का अनुहार मास्कलेडीबग अनुहार मास्कBielenda अनुहार मास्कपुरुषहरूको लागि अनुहार मास्कघर अनुहार मास्कघरेलु अनुहार मास्कहेब अनुहार मास्कसफा अनुहार मास्कअनुहार मास्क समीक्षाअंकित अनुहार मास्कहरूrossmann अनुहार मास्कसेफोरा अनुहार मास्कपाना अनुहार मास्कsachets मा अनुहार मास्कभिसा अनुहार मास्कziaja अनुहार मास्कअनुहार मास्क जनावरहरुकपाल मास्कघर मास्कघर अनुहार मास्कडिस्पोजेबल मास्ककोरियाली मास्कloreal अनुहार मास्कमेडिकल मास्कएक्ने मास्कअनुहार मास्कघरको अनुहारको मास्कब्ल्याकहेड मास्ककपाल मास्कनमी मास्कमॉइस्चराइजिंग अनुहार मास्कघर बनाएको मोइस्चराइजिंग अनुहारको मास्कसुरक्षात्मक मास्कसफा मास्कअनुहार सफा मास्कपौष्टिक अनुहारको मास्कमास्क बन्द छीलआँखा मास्कrossmann मास्कसेल्फी परियोजना मास्कपाना मास्कपाना मास्क pieces० टुक्रापाना मास्कहरू सेटexfoliating अनुहार मास्कपुरुषको अनुहार मास्कमिस अनुहार मास्कसबै भन्दा राम्रो मास्कसबै भन्दा राम्रो अनुहारको मास्कप्राकृतिक मास्कप्राकृतिक अनुहारको मास्कप्राकृतिक अनुहारको मास्कमॉइस्चराइजिंग अनुहार मास्कविज्ञापन लुगामास्क लागू गर्न ब्रशसिफारिस गरिएको अनुहार मास्कहरूव्यावसायिक अनुहार मास्कघरको अनुहारको मास्कहरूको लागि व्यंजनहरूrossmann अनुहार मास्कrossmann अनुहार मास्करसियन अनुहार मास्कसेफोरा अनुहार मास्कसेफोरा अनुहार मास्कछाला mas79 मास्कसस्तो र राम्रो अनुहारको मास्कसस्तो अनुहार मास्क